Caruur degmada Hobyo ugu geeriyooday cudurka jadeecada. – Radio Daljir
Caruur degmada Hobyo ugu geeriyooday cudurka jadeecada.
Seteembar 5, 2012 4:09 b 0
Hobyo, Sep 05- wararka naga soo gaaray degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa soo sheegaya inuu deegaankaasi uu ka dilaacay cudurka jadeecada kaasoo sababay dhimashada caruur yaryar.
Inta la hubo lix caruurta ah oo da’doodu yartahay ayay soo sheegayaan wararka naga soo gaaraya dadka degmada Hobyo, halka ay jiraan kuwo kale oo la ildaran.
Illaa iyo hada tirada caruurta ee dhimatay ayaa ah affar caruura oo sida la sheegay ka soo wada jeeda hal qoys, sida uu Radio daljir u sheegay Shariif Shire Shuuriye oo ka mida dadka ku nool degmadaasi.
Shariif Shire ayaa sidoo kale Radio daljir u sheegay in ku dhawaad toban qof loola cararay goobo caafimaad oo gaar loo leeyahay.
Hobyo oo maamul ahaan hoos tagta Gal-mudug ayaa ka mida deegaanada caafimaad ahaan aad u hooseeya mana jiraan xarumo ka dhexeeya bulshada oo si guud loo wada isticmaalo marka laga reebo kuwo shakhsiyaad ay leeyihiin aysana ool agab iyo dawo muhiima.
Xerada bara-kacayaasha Tawakal oo ay ka bilowdeen barnaamijyo iskaa wax-uqabsaa oo qashina lagu aruurinayo.